Home » Drama, Essays.. » ဆင်​ ဦးတိုက်​ ကြဦးမလား
ဘယ်​တုန်းကတည်းက အရိုးစွဲလာတဲ့ အယူသည်းမှုလဲ​တော့ မဆန်းစစ်​ချင်​​တော့ပါဘူး ။ အိမ်​၀င်းတံခါး​ပေါက်​ကို ဆင်​ဦးတိုက်​ရင်​ လာဘ်​​ကောင်းတယ်​ ။ ဆိုတဲ့ အယူသီးမှု ။ ခု​တော့ အဲ့ အယူသီးမှုကို အခွင့်​​ကောင်းယူပြီး အသုံးချလိုက်​တာက​တော့ သစ်​ဆွဲစရာ မရှိ​တော့တဲ့ ဆင်​ဦးစီး တစ်​​ယောက်​​ပေါ့ဗျာ ။ ​နေ၀န်းနီ ညည ရှစ်​နာရီ​လောက်​ စက်​ဘီး​လေးနဲ့ အိမ်​ပြန်​လာရင်​ ​တွေ့​တွေ့​နေရတာ နှစ်​ည သုံးညရှိပြီ ။ ​တွေ့ကာစ ညက​တော့ အမှုမဲ့ အမှတ်​မဲ့ ပါပဲ ။ ​အော်​ ……. ဆင်​အငှားရှိလို့ မြို့ထဲက​နေဖြတ်​ပို့တယ်​လို့ပဲ ထင်​မိတာ ။ ​နောက်​ညကျ​တော့လည်း အရင်​​နေ့က ​တွေ့ခဲ့တဲ့ လမ်းမဟုတ်​ပဲ ​နောက်​တစ်​လမ်းမှာ ။ အဲ့ ဆင်​နားမှာလဲ လူစုစု စုစုနဲ့ စကားတီးတိုး​ပြောလို့ ။ ကိုယ်​နဲ့ ဘာမှမပတ်​သက်​​တော့လည်း အမှတိမထင်​ပဲ ဖြတ်​လာခဲ့မိတယ်​ ။ ​ဟော အခုညကျ​တော့လည်း ပိုပြီး အတွင်းကျတဲ့ လမ်းက​လေးထဲမှာ ။ ဆင်​​ပေါ်မှာ ပုခက်​တင်​ထားပြီး အ​ပေါ်က ဆင်​ဦးစီး ​ပြောလိုက်​တဲ့ စကား​ကြောင့်​ ​နေ၀န်းနီ ပြုံးလိုက်​မိတယ်​ ။ သူ​ပြောလိုက်​တာက အနီးပတ်​၀န်းကျင်​က လူ​တွေကြား​အောင်​ ခပ်​ကျယ်​ကျယ်​ ​အော်​လိုက်​ကြတာပါ ။
ဦးနီဂို မြက်နှာမဲfoxပျံ နဲ့ ယခိုင်ကဇံမိ ဒို့ဂ ကျောင်းသားတွေကို အသုံးချ အမြတ်ထုပ်နေသတဲ့.. ရွာထဲ တအိန်တပ်စင်း လိုက်ပြောတာ နားနဲ့ စက်စက် ကြားဂဲ့ဒါ။။
ဥပဒေ ကို ထပြင်လိုက်တာ နဲ့ အားလုံးကောင်း သွားမှာ သေချာရင် ဆယ်ခါပြန် ထောက်ခံ ပါတယ် အဘနီ ရယ်။
ဥပ​ဒေ ​တွေက​တော့ ပြင်​ရမှာပဲ ။။ပြည်​သူ​တွေကို စည်းကမ်းလိုက်​နာ​အောင်​ စည်းကမ်း​ဘောင်​အတွင်း​နေတတ်​​အောင်​ ဥပ​ဒေ ​တွေနဲ့ပဲ​လေ့ကျင့်​ရ​တော့မှာ ။ အဲ့​တော့ အုပ်​ချုပ်​သူက ပြဌာန်းမဲ့ ဥပ​ဒေကို မကြိုက်​ဘူး ။ ဘာလို့လဲဆ်ု​တော့ သူပြဌာန်းတဲ့ ဥပ​ဒေကို သူကိုယ်​တိုင်​မလိုက်​နာလို့ ။ ပြည်​သူပြဌာန်းတဲ့ ဥပ​ဒေ ကသာ တစ်​ကဲ့ ဒီမိုက​ရေစီ ။ ပြည်​သူက ဒီဥပ​ဒေ ပြဌာန်းမယ်​ လိုက်​နာနိုင်​တဲ့ အစိုးရ လာခဲ့ ။ အဲ့သလို​ပြောလိုက်​လို့ ကျုပ်​ ကို ကွန်​မြူနစ်​ တံဆိပ်​ကပ်​အုံးမလား မသိ
အတတ်ပညာ အပြင် အသိပညာပါ အားနည်းနေမှု (ဆင်ချင်တုံတရားအားနည်းမှု) ဟာ ပြသနာတစ်ရပ်ပါ။ ဥပဒေကို ပြင်ရုံနဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ ပျောင်းလဲဖို့ကမဖြစ်နိုင်ပဲ။ တောင်းဆိုနေတဲ့ ၁၁ချက်ထဲမှာ အလယ်တန်းအထိ အခမဲ့ ပညာသင်ကြားနိုင်ရေးဆိုတာကလွဲလို့ ကျန်အချက်တွေက ဥပဒေပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် အထမြောက်အောင် လုပ်ဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါနဲ့စကားမစပ် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက ဆင်တွေမှာ အရေပြားရောဂါများ ဖြစ်နေကျသလား??????
အသိမမှားရင်.. အဲဒီဆင်ဖြူတကောင်… (ငှားတတ်ရင်) တနှစ်ဒေါ်လာ ၅သိန်းလောက်ရှာပေးနိုင်သဗျ…။
အဲဒီဝင်ငွေနဲ့.. ကလေးစာသင်ကျောင်းအတွက်.. အင်္ဂလန်က.. မာစတာဘွဲ့ရဆရာတွေပြန်ငှားပေးပြီး.. မြန်မာပြည်မယ်.. စာသင်ခိုင်းနိုင်ရင်.. ဆင်ဖြူတော်ပါ.. တကယ့်ဆင်ဖြူတော်ဖြစ်မပေါ့…။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သတ္တ၀ါတစ်ကောင် ကျွေးတာတော့ ကောင်းပါဒယ် ဆြာနီရာ၊ မျောက်ပြဆန်တောင်းသလို သူတို့လဲ ဆင်ပြငွေတောင်းတာပေါ့၊ လုပ်စားပါစေ ဒီလောက်လေးတွေတော့…
အဘနီ နာမည်ပေးထားတဲ့ ဗြဟ္မဏဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကြောင့်ပေါ့ အဘနီရယ်။
ဘာမှမလုပ်.. ထိုင်တောင်းတာထက်တော့ အများကြီးသာပါသေးတယ်..။
မတော်..အဲဒီဆင်.. မုန်ယိုပြီး အိမ်တလုံးလောက်ဖျက်.. လူတွေသတ်မိရင်.. ဘယ်သူလျှော်မယ်မသိ..။
အဲ.. ရပ်ကွက်ထဲက အိမ်တော်တော်များများမှာ..
ဥပါဒါန်ကြောင့် ဥပဒ် မရောက်အောင် နေမှာပေါ့ ဟယ်
.အဲ့ဒါက လှည်းဦးတိုက်လှေဦးတိုက်နေရာမှာရှိနေတဲ့ အိမ်တွေမှာလုပ်ထားလေ့ရှိတယ်…အလက်ဆင်းရ
ရှေးက.. လှည်းဖြစ်ဖြစ်.. လှေဖြစ်ဖြစ်.. ယဉ်ဖြစ်ဖြစ်.. အရှိန်နဲ့လာရင်.. မကွေ့မရှောင်နိုင်ပဲ.. တည့်တည့်ဝင်တိုးမှာမို့..လှည်းဦးတိုက်လှေဦးတိုက်နေရာ.. ကြက်လျှာစွန်းထောင့်…စတဲ့အ်ိမ်..နေရာတွေမှာ.. ရောင်ပြန်အလင်း.. ရောင်ပြန်ရုပ်နဲ့..လန့်အောင်.. သတိထားမိအောင်.. မှန်ထား..။ သစ်ပင်စိုက်ဆိုတဲ့အလေ့အကျင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်ထင်မိတယ်..။
ဟုတ်ပါ့ ။ ရပ်ကွက်ထဲမတော့ တချို့က…မကောင်းဆိုးဝါးတွေ မလာနိုင်အောင်တဲ့..
အယူအဆ ဓလေ့ထုံးစံဆိုတာက ကိုယ့်နိုင်ငံမှာမှတော့မဟုတ် ကိုယ့်ထက်အယူသီးတဲ့နိုင်ငံတွေတောင်အများကြီးပါ။